/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Epacadostat (INCB024360) ntụ ntụ
Rating: SKU: 1204669-58-8. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
Usoro Molecular: C11H13BrFN7O4S
Molekụla arọ: 438.23
"INCB024360 ntụ ntụ gbakwunyere nivolumab nọ na-arụsi ọrụ ike na phase II melanoma na cell carcinoma squamous nke isi na olu cohorhor," ka onye nkụzi na-amụ akwụkwọ bụ Karl D. Lewis, MD, prọfesọ na-akpakọrịta, Division nke Medical Oncology, Mahadum nke Colorado Anschutz Medical Campus kwuru. “Achọpụtara azịza n'agbanyeghị agbanyeghị okwu PD-L1 na ọnọdụ HPV. Nzaghachi niile na-aga n'ihu na nkwụsị data.
"INCB024360 ntụ ntụ gbakwunyere nivolumab egosighi mgbaàmà nrụpụta ọrụ na ndị a na-ahọpụtaghị nke ọrịa cancer ovarian na-ajụ ajụ na ndị ọrịa CRC," Lewis kwuru banyere nsonaazụ ahụ. Banyere nchọpụta n'ọdịnihu, o kwuru na "mbido nke nchekwa na nrụpụta ọrụ na-akwado nyocha ọzọ nke nivolumab na Epacadostat ntụ ntụ na ndị ọrịa na-agwọ ọrịa na melanoma na ndị ọrịa nwere SCCHN."